Hiova ny abidy malagasy? | Hery - Tsiky dia ampy |
Hiova ny abidy malagasy?
2013-03-19 @ 15:20 in Kolotsaina
Manaraka ny asa ataon'ny Akademia Malagasy momba ny "fanatsarana" ny teny malagasy aho ka amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny momba ny Handrafetana (indray) ny abidia malagasy ry zareo. Nadikako ato moa ilay izy na dia tao amin'ny lisitra serasera izay hita ato aza no tena nandefasany ny resaka.
Mahaliana ahy aloha ny fomba fitondrany ny resaka satria mamaly avy hatrany ireo efa nanakiana azy tao amin'ny serasera sy ny fisalasalana mety hisy izy. Na izany aza anefa dia apetrako eto ihany ireo hevitra izay manitikitika ahy ka inoako fa hamaly izy.
1. Ny fitsipika hoe feo iray ho an'ny litera iray, ary litera iray ho an'ny feo iray.
Misy teny malagasy vitsivitsy izay sarotra fehezina amin'io. Misy ireo teny malagasy izay tiana hamoaka feo [o] no tsy tena mitovy. Ohatra ny teny "noana" (tsy ampy sakafo) sy ny "naona" (fitaraindrainana). Ny "loaka" sy ny "laoka". Amin'ny ara-peo ireo teny roa ireo dia samy mamoaka feo [o] avokoa saingy ny fifamadihan'ny "a" sy ny "o" no hahenoana kely ny fahasamihafany.
2. Fampidirana litera vaovao sy fanatsoahana litera nampiasaina
Hitako ao amin'ilay rindra-kevitra fa hampidirina ny "u" ary hoesorina ny "y". Izany rahateo hoy izy dia fiverenana amin'ny firafitry ny abidia malagasy hatramin'ny voalohany raha ny tantara no jerena. Araka izany dia ny "u" no misolo ny feo [ou] izay ampiasaina amin'ny "o" amin'izao fotoana izao, ary ny "o" kosa dia manjary manana feo [o] toa ny an'ny teny frantsay.
Iriko mba hojeren'ny Akademia Malagasy tsirairay ny teny malagasy rehetra misy ny litera "o" ka ezahiny ampiharina io fampidirana litera vaovao io. Ankoatra ny mety hisian'ilay olana eo amin'ny fitsipika voalaza etsy ambony mikasika ireo zanatsoratra roa (oa sy ao) izay samy mahafehy feo irao ([o]) dia mety hifanehitra amina teny vitsivitsy izay manaraka fitsipika malagasy izy. Ka anisan'izany ohatra ireto fanamarihana ireto:
Faran-teny: Ny ankamaroan'ny teny malagasy dia tsy tononina ny teny farany. Ny teny hoe "rano" ohatra dia vakiana fotsiny hoe "Ran" saingy heno kely ihany ny litera farany. Hanaraka izay fitsipika izay ve ny fametrahana ny "u" ho faran-teny? Toy ny hoe "Tuntulu" na koa "Mululu".
Tsindrim-peo: Mifanohitra amin'izay, ahoana kosa no atao raha toa ka faran-teny misy tsindrim-peo ? Ny faran-teny mamoaka feo [ou] dia maro no ampiasàna tsindrim-peo toa ny hoe "Mankato", "Filazana manjò", "Afa-po", "fo", "lo". Indraindray moa dia misy mihitsy ny mametraka ny tsindripeo amin'ny "o" farany ka lasa "ò". Dia ho toa izay koa no handraisana ny "u" ? Sa manjary hasiana "a" faran-teny? Misy tokoa mantsy ny manoratra hoe "Mankatoa". I Solonavalona aza moa manoratra hoe "Abidia" fa tsy hoe "Abidì".
Mino aho fa tsy ho maimaika hamoaka lalàna mikasika ity firafitry ny "abidy" ity ny ao amin'ny Akademia Malagasy fa handinika tsara ny teny tsirairay mety hiantraikan'izany na ny avy ao afovoantany izany na ny avy any antsiraka.
(Sary: Boky Lala sy Noro)